Wasiir Ku xigeenka Daakhiliga Iyo Maayarada Dalka Oo ka soo laabtay shir ay kaga qeyb galeen Uganda | Somaliland.Org
Weftigan oo ka soo degay madaarka caalamiga ah ee Cigaal International Airport waxa xubno ka ah Maayaradda Hargeysa, Boorame, Berbera, Burco, Gabilay, Sheekh Oodweyne, Agaasimaha guud ee wasaarada qorshaynta qaranka.
Maayarka caasimada Hargeysa Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir oo ka hadlay socdaalkoodii ayaa ka war bixiyay shirkii ay ka qeyb galeen waxaanu yidhi “Shirkan aanu Uganda u tagnay wuxuu ahaa mashruucii Joint Program ee dawladaha Hoose lagu horumarinayo oo sanadkiiba hal mar la qabto laguna go’aamiyo dhaqaalaha loogu tallo galay in lagu fuliyo mashaariicdaasi, waxaanu u tagnay inaanu soo ogolaano oo soo saxeexno mashaariicda loogu tallo galay sanadka 2012-ka ee fooda inagu soo haya ee ay wada wadaan dawladaha Hoose, Wasaarada Daakhiliga iyo sadex Haa’yadood oo kuwa qaramada midoobay ah.”
“Waxaanay dhammaan dhinacyadaasi la kulamayeen qaadhaan bixiyeyaashii kaasi oo aanu isla garanay in mashaariicda sanadka 2012-ka la balaadhiyo waxaana laga dhigay 13 Milyan iyo sadex Boqol iyo sideed iyo sideetan kun oo Dollar. Waana guul weyn oo u soo hoyatay dawladaha Hoose ee dalka gaar ahaan magaalooyinka ku jira mashruucan,”ayuu yidhi Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir.
Maayarka Caasimadda Hargeysa waxa uu intaasi ku daray inay la kulmeen mudadii ay joogeen dalka Uganda jaaliyada iyo ardayda reer Somaliland ee ku sugan dalkaasi oo uu xusay inay uga warameen xaalada dalka.
Wasiir Ku xigeenka wasaaradda Arrimaha Gudaha Md. Cismaan Garaad Soofe oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in dawladaha Hoose ee magaalooyinka dalka ay ka faa’iidaystaan mashaariicda horumarinta oo uu tilmaamay in sanadkan loo laban laabay lagana dhigay 13 Milyan oo dollar halkii markii hore ay ka ahayd lix milyan oo qudha.
Md. Cismaan Garaad Soofe waxa uu tilmaamay in shirkan ay ka qeyb galeen oo sanad kasta lagu qaban jiray dalalka dariska la ah Somaliland sanadkan la go’aamiyay inay sanadka 2013-ka lagu qabto magaalada Hargeysa ka dib markii lagu qancay maamul wanaaga iyo nabadgelyada ka tisqaaday dalka.
Previous PostGuddi Dhex dhexaad ah oo awood loo siiyay soo afjarida shaqaaqaddii Ka dhacday Magaalada CeerigaaboNext PostKhubaro dalka u yimid sahmin halkii la dhigi lahaa idaacada cusub ee dalka laga hirgelinayo	Blog